Jaad loo soo waday Soomaaliya oo lagu Gubay Ismaamulka Lamu | Universal Somali TV
Ciidanka badda Kenya ee ku sugan Ismaamulka Lamu gaar ahaan biyaha xeebaha badweynta Hindiya ayaa gacanta ku dhigay laba doon oo si qarsoodi ah jaad loogu soo safrinayay gudaha dalka oo qiimahooda lagu sheegay 250 oo doolarka Mareykanka.
Labada doon ayaa habeenimadii xalay lagu qabtay deegaanka Barakuda oo qiyaastii boqol kiilo Mitir u jirta magaalada Lamu, waxaana ay ciidankan ku wareejiyeen kuwa ilaalada Xeebaha kuwaasi oo dab ku qabad siiyay xeebta Manda Ras Kitau.
Arintaan ayaa waxaa warfidiyeenada u xaqiijiyay taliyaha ciidanka Amniga Ismaamulka Lamu Irungu Macharia
Waxay noo sheegeen in ay doonayeen in ay Jaadka ay gaarsiiyaan deegaanka Kiunga si ay uga sii gudbiyaan Soomaaliya, balse waa in cidwaliba ay ka warqabtaa in aan mamnuucnay Jaadka inta uu jiro caabuqa Corona, ayuu yiri Macharia.
Dhanka kale madaxa imaamyada iyo muwacdiinta Kenya ee gobolka xeebta Kenya oo loo yaqaan CICC Mohamed Abdulkadir ayaa soo dhaweeyay go,aankan waxaana uu sheegay in ay taageersan yihiin go,aanka Ismaamulka Lamu ku Mamnuucay Jaadka.
Kan-xigaDowlada Itoobiya oo xaalad deg deg ah...
Kan-horeBoqolaal ruux oo markale caabuqa Coro...
53,492,105 unique visits